Sina Tsara laza alika any ivelany 6061 6082 5083 2024 7075 boribory vita amin'ny alimina aluminium sy mpamatsy | Huifeng
Famaritana ny bar aluminium
Firaka: 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A, 6082, 6463, 7020, 7075 sns
Araka ny singa metaly samihafa ao anaty tsoraka aluminium, ny tehina aluminium dia azo zaraina ho sokajy 8, izany hoe, azo zaraina ho andiany 9 izy ireo:
1. Ireo tsorakazo alimo 1000 dia maneho ny andiany 1050, 1060, ary 1100. Amin'ny andiany rehetra, ny andiany 1000 dia an'ny andiany misy atiny aliminioma indrindra. Ny fahadiovana dia mety hahatratra mihoatra ny 99,00%. Satria tsy misy singa ara-teknika hafa, tsotra ny fizotry ny famokarana ary somary mora ny vidiny. Io no andiany be mpampiasa indrindra amin'ny indostrialy mahazatra. Ny ankamaroan'ny vokatra mivezivezy eny an-tsena dia andiany 1050 sy 1060. Ireo tsorakazo alimo 1000 dia mamaritra ny atiny alimina farafahakeliny amin'ity andiany ity araka ny tarehimarika arabo roa farany. Ohatra, ny tarehimarika arabo roa farany an'ny andiany 1050 dia 50. Araka ny fitsipiky ny fanondroana marika iraisam-pirenena, ny atiny aliminioma dia tokony hahatratra 99,5% na mihoatra mba ho vokatra mahay. Ny fenitra teknikan'ny firaka alimina ao amin'ny fireneko (gB / T3880-2006) dia mazava ihany koa fa mamaritra fa ny atin'ny alimina 1050 dia mahatratra 99,5%. Toy izany koa, ny atin'ny alimina an'ny tsoraka aluminium 1060 dia tsy maintsy hahatratra 99,6% na mihoatra.
2. Ny tsoraka aluminium alimo 2000 dia maneho ny 2A16 (LY16) sy 2A02 (LY6). Ireo tsorakazo alimo 2000 dia misy mampiavaka azy amin'ny hamafin'ny avo, miaraka amin'ny votoatin'ny varahina avo indrindra, izay manodidina ny 3-5%. Ny tsoraka aluminium alimo 2000 dia an'ny fitaovana aliminiam-panamoriana, izay matetika tsy ampiasaina amin'ny indostrialy mahazatra.
2024 dia firaka vita amin'ny aliminioma sarotra ao anaty andiana alimo-varahina-magnesium. Izy io dia firaka azo tsaboina amin'ny hafanana miaraka amin'ny tanjaka avo, mora fanodinana, mora mivadika ary mahazaka harafesina ankapobeny.
Aorian'ny fitsaboana hafanana (T3, T4, T351), ny toetra mekanikan'ny tsoraka aluminium 2024 dia nihatsara tanteraka. Ny masam-panjakana T3 dia toy izao manaraka izao: tanjaka mampatanjaka 470MPa, tanjaka 0,2% 325MPa, fanitarana: 10%, tanjaka havizanana 105MPa, hamafin'ny 120HB.
Ny fampiasana lehibe ny tsorakazo alimo 2024: firafitry ny fiaramanidina, rivet, foiben-kodiarana kamiao, singa mpiorina ary faritra hafa amin'ny rafitra hafa
3. Ny tsorakazo alimina 3000 an'ny 3000 dia maneho indrindra ny 3003 sy 3A21. Ny teknolojia famokarana tsoraka aluminium misy andiana 3000 any amin'ny fireneko dia tena tsara tokoa. Tora-by aluminium miisa 3000 no vita amin'ny manganese ho singa lehibe. Ny atiny dia eo anelanelan'ny 1.0-1.5, izay andiany misy fiasana manohitra harafesina tsara kokoa.
4. 4000 andiana tsorakazo alimina Ilay solontena dia 4A01 4000 andian-jiro aluminium misy an'ny andiana manana atiny silika avo kokoa. Matetika ny atin'ny silika dia eo anelanelan'ny 4,5-6.0%. Izy io dia an'ny fitaovana fananganana, faritra mekanika, akora fanaovana hosoka, fitaovana fantsona; teboka miempo ambany, fanoherana ny harafesina tsara, famaritana vokatra: mahazaka hafanana sy mahatohitra fitafiana
5. Ireo tsorakazo alimo 5000 dia mampiseho ny andiany 5052, 5005, 5083, ary 5A05. Ireo tsorakazo alimina 5000 dia an'ny andiana alim-bary alimika ampiasaina matetika, ny singa lehibe dia maneziôma, ary ny atin'ny magnesium dia eo anelanelan'ny 3-5%. Izy io koa dia azo antsoina hoe firaka aliminioma-magnesium. Ny tena mampiavaka azy dia ny hakitroky ambany, ny tanjaka amn'ny tanjaka ary ny fanitarana avo. Amin'io faritra io ihany, ny lanjan'ny firaka aliminioma-magnesium dia ambany kokoa noho ny andiany hafa, ary be mpampiasa koa amin'ny indostrialy mahazatra. Any amin'ny fireneko, ny tsorakazo alimina 5000 series dia iray amin'ireo andiana tsorakazo matotra kokoa.
6. Ny tsoraka aluminium 6000 dia maneho ny 6061 sy 6063 izay misy magnesium sy silika indrindra. Noho izany, ny tombony amin'ny andiany 4000 sy ny andian-dahatsoratra 5000 dia mifantoka. 6061 dia vokatra forging aluminium vita amin'ny hatsiaka, mety amin'ny fampiharana misy fepetra takiana amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny fitrandrahana oksidana. . Ny fahaiza-miasa, ny coating mora ary ny fanodinana tsara.
7. Ny tsoratry ny alimo 7000 dia maneho 7075 ary misy zinc ny ankamaroany. Izy io koa dia an'ny andiana seranam-piaramanidina. Izy io dia firaka alimina-manezioma-zinc-varahina, firaka azo tsaboina amin'ny hafanana, ary firaka alimina faran'izay mafy miaraka amin'ny fanoherana tsara. Miankina amin'ny importa izany amin'ny ankapobeny, ary mila hatsaraina ny teknolojia famokarana ny fireneko.
8. 8000 andian-tsoratry ny aluminium Ny 8011 ampiasaina matetika dia an'ny andiany hafa, ary ny ankamaroan'ny fampiharana dia foil aluminium, izay tsy dia ampiasaina amin'ny famokarana tehina aluminium.
Teo aloha: China factory 5052 loko PVDF mifono coil aluminium 0,7mm matevina
Manaraka: 6061 6063 7075 Tube Sodina / Tube Aluminium
Rodin'ny firaka aluminium
Rodina boribory aluminium
Rodin'ny Kely Aluminium
Tehina Aluminium Anodized
Wire Aluminium Bare
Biraon'ny aliminioma tafidina
Tsorakazo loaka Aluminium
s Aluminium Extrusion Bar
Tsorakazo Aluminium matevina
Tsorakazo aluminium manify
Karazan'ireo tsiroara aliminioma